The 25 Best Couples ’Sex Toys to Surprise and Delight You nobabili - Impilo
Amathoyizi Ocansi Abashadikazi Abangu-25 (Ngoba Sonke Sidinga * Okuthile * Okungabheka Phambili Namuhla)
25 Best Couples Sex Toys
Sizokuvumela ungene ngasese: Noma yiliphi ithoyizi locansi liyithoyizi lezocansi labashadikazi uma uzama kanzima ngokwanele (noma nje qamba ngokwanele). Futhi ngokuza kosuku lukaValentine, unezaba ezinhle zokuba matasa embhedeni. Kodwa-ke, kukhona amathuluzi amaningi asebenzayo asebenza kangcono uma kukhulunywa ngebhizinisi lokujabulisa nina nobabili.
Ngiyafuna ukwazi, kepha angazi ukuthi ngingawaveza kanjani amathoyizi ocansi nozakwethu
Ungamangala ukuthi umlingani wakho ulalela kanjani ukuzama ithoyizi, ngoba imibhangqwana eminingi isebenzisa amathoyizi ezocansi ukuthuthukisa ulwazi lwawo nokuxhumana. Umenzi wamathoyizi ocansi We-Vibe wenza isifundo kwabesilisa nabesifazane abayi-1 000 abaphakathi kweminyaka engama-35 nengama-55 ubudala, futhi bathola ukuthi amaphesenti angama-49 emibhangqwana esebenzisa ama-vibrator ndawonye babika ukuxhumana kaningi, kungaba ngamathoyizi ocansi noma ezinye izihloko. Ibhonasi eyengeziwe: Kunobufakazi bokuthi ukusebenzisa amathoyizi ndawonye kwandisa ukukhululeka kwezithandani ngokunikeza nokuthola ukuqondiswa komlingani wabo embhedeni.
Ngokuvumelana ne ochwepheshe bezemfundo yezocansi , indlela engathathi hlangothi yokukhulisa amathoyizi ocansi ukusho ifilimu noma uhlelo lwethelevishini bese ubuza, 'ubucabangani ngakho leso sigcawu ku Idolobha Elibanzi lapho u-Ilana .... 'USoumyadip Rakshit, umsunguli wenkampani yezempilo yaseBrithani I-MysteryVibe , isikisela ukuthi 'ungenise abalingani engxoxweni ephathelene namathoyizi ezocansi ngokuhlanganyela izindatshana ezicwaningwe kahle, ikakhulukazi ezindaweni ezidayiswayo.' Noma ungamane uthi: 'Bengicabanga ukuzama le nto yokudlala nawe, futhi bengifuna ukwazi ukuthi ucabangani.' Noma yini egcina ukugxila enjabulweni efanayo kanye nelukuluku lokudlala kuyindlela enhle yokwethula amathoyizi ngokujwayelekile, noma ethize.
Futhi zizwe ukhululekile ukusho lo bhubhane: Ukuthengiswa kwamathoyizi sekukhuphukile selokhu kwaqala ukukhiya phansi , futhi imibhangqwana iba nobuciko. Unalokho engqondweni, nanka amathoyizi angama-25 amahle kakhulu azo zonke izinhlobo zokuzijabulisa okusondele.
OKUSHIWO: Uma Uzithengela Into Eyodwa, Kufanele kube Lo Mgexo Wokudlidliza
1. I-Lelo Tor Couples Ring
Le ndandatho yesiliconi ephephile eluhlaza okomzimba ongena emzimbeni ilingana nepipi, futhi inezivinini eziyisithupha ukusuka ekukhonondeni okuncane kuya ekushayweni ngamandla. Kwenzelwe ukunika injabulo kubo bobabili abalingani, ngoba ingxenye edlidlizelayo ivuselela oyigqokile nozakwethu. Njengoba omunye umsebenzisi esho: 'Umkami uthanda ukudlidlizela okuningi. Ingisiza ngigcine ama-erections amade. Okuhle kakhulu okwamanje, unkosikazi wami uthanda u-Os omkhulu. ' O, futhi ayinamanzi futhi iyakwazi ukugcwaliseka.
Ithenge ($ 139)
'Angisiyena owazi amathoyizi asezingeni eliphezulu kepha iZumio ingushintshi womdlalo ophelele - iyodwa futhi ikakhulukazi nomlingani wayo,' kusho omunye umsebenzisi, ochaza ukukhulisa ama-orgasms ngayo. Le divayisi ezacile isebenzisa ukushintshanisa esikhundleni sokudlidliza okunikezwa amathoyizi amaningi aphathwa ngesandla, okuholele ekuvuseleleni okukhonjwe kakhudlwana. Ikhanda elincane elijikelezayo libhucunga i-clitoris, ngezivinini eziyisishiyagalombili ongakhetha kuzo.
Ithenge ($ 98)
3. I-Adorime G-Spot Rabbit Engangenwa Manzi I-Vibrator Yamaphuzu Amathathu
Lesi sidlidlizi esenziwe ngokumnyama esimnyama esimise okwe-Y sithola amamaki aphezulu wokuguquguquka kwemisebenzi ehlukahlukene, ngoba ukwakheka kwayo kwe-ergonomic namasethingi amaningi kwenza kube nezimo kunoma iyiphi indawo erogenous. Njengoba umsebenzisi oyedwa echaza 'kunezilungiselelo eziyisikhombisa zamakhanda amabili aphezulu, nezilungiselelo eziyisikhombisa kushaft, okwenza izinhlanganisela ezingama-49 ezahlukahlukene zenjabulo yokudlidliza. Uqinisekile ukuthola izinhlanganisela ezilungele wena nomlingani wakho. '
$ 29 e-Amazon
okweqanda ubuso kwekhanda insikazi
4. Crave Vesper isidlidlizi
Lesi sidlidlizi esincanyana, esiphathekayo sinethiphu eyindilinga yokukhuthaza ingaphandle kanye neshaft ecishe ibe ngamayintshi amane yokukhuthaza ingaphakathi. Futhi inezivinini ezine nezindlela ezimbili — kodwa akupheleli lapho. Okusho ukuthi kuzogqokwa njengomgexo, ungawuslayida kalula entanyeni yakho (futhi uwusebenzise njengophawu lokwazisa umlingani wakho ncamashi isikhathi sini).
YITHENGE ($ 69)
5. SI-VIBE Izithandani Isidlidlizi
Yinqume kumlingani wakho ngesikhathi sokuya ocansini, ngenjabulo ethile ye-clitorial ne-G-spot, ongazizwa nayo. Akungenwa manzi ngokuphelele, leli ithoyizi elihle lokugcina eshaweni noma kubhavu. Njengoba omunye umbuyekezi akubeka, Uyazi ukuthi uyayifuna. Vele ukuthole. Ngeke uzisole. WONKE umuntu uyakudinga lokhu.
$ 59 e-Amazon
6. U-Annabelle Knight Hawu! Isethi Ye-Jeweled
Ukudlala i-anal kungaba isitimela sesithathu ebudlelwaneni, kepha le setha yamapulagi angasiza ukuheha umuntu ekuhloleni imingcele emisha. 'Usayizi ophelele uma uqala futhi uzizwa umangalisa!' kusho omunye umbuyekezi. Futhi, osayizi ababili abafakiwe kulesi sethi kusho ukuthi ukuzama lokhu akusabisi ukwedlula isipiliyoni silingana nakho konke nge-plug eyodwa.
Okanoma yisiphi isikhathi esishisayo se-sexy noma ukusethwa kwendlela yokudweba yamahlaya (noma mhlawumbe yomibili), sikhetha i-WeVibe Moxie Remote ne-App Control Wearable Clitoral Panty Vibrator. Yi-vibrator enesikhumba esingamamitha amathathu nohhafu ngamasentimitha amathathu enamathela ezingutsheni zakho zangaphansi ngezibuthe ezinamandla, nerimothi ephathekayo elawula ijubane namandla okuvevezela. Futhi-lokhu udumo, uma uthanda-isidlidlizi se-panty singalawulwa ngohlelo lokusebenza lwe-Bluetooth kusuka noma yikuphi.
Ithenge ($ 130)
8. Dame Eva II Hands-Free isidlidlizi
Yenzelwe ukugqokwa ngowesifazane, i-Eva II ilungele ukuvusa imizwa ngesikhathi sobulili. Iphinde ifake ukwakheka okungenazandla (amaphiko amabili angafakwa ngaphansi kwelabia ukuze ihlale endaweni), ngakho-ke nobabili ningazisebenzisa lezo zandla ukwenza ... ezinye izinto. P.S. Futhi ayinamanzi!
Ithenge ($ 135)
izinwele ezihlukene ezisikiwe zabesifazane
Lesi sidlidlizi esigobekayo sikuvumela ukuba uhlanganyele nobuciko besikole esidala (wena nomlingani wakho ningasigoba kunoma yisiphi isimo osifunayo) kanye nobuchwepheshe obusha (kunezinjini eziyisithupha ezansi kobude baso obulawulwa uhlelo lokusebenza oluneminyakazo esethwe ngaphambilini noma ukulandelana kwakho). I-Clitoral, G-spot kanye ne-perineum stimulation konke kuyingxenye yamaqhinga ayo; ziningi kakhulu, abenzi bazo baphume nazo ipaki lamakhadi ukuze ukwazi ukuqoqa yonke imizwa.
Ithenge ($ 150)
10. I-Dominix Deluxe Isikhumba Esigoqiwe Esifihlekile
Ihlanganiswe kancane futhi inkulu ngokwanele ukumbozwa okugcwele, lokhu kuyindlela engcono kunezinhlobo eziningi ezingezinhle emakethe, futhi ibhakede liyigcina isesimweni esingcono kakhulu kunamaribhoni ashubile, ashelelayo kwamanye amaski. 'Lokhu kuvalwa kwamehlo akuhambi nakancane. Kugcina ukukhanya konke, kuzizwa ukhululekile kulowo okugqokile, kuyashintsha, kuqiniswa, 'kusho elinye ikhasimende elinelisekile.
Ithenge ($ 27)
11. Amaphepha Ezemidlalo URainbow Mini Flogger
Lesi siswebhu sesikhumba se-vegan sisekugcineni kwekhompyutha ye-BDSM accessories spectrum, kepha sisazoluma lapho sisetshenziswa ngokudlala. Kukhona i-luminescence ethambile kawoyela emisileni engaphandle, kuyilapho ama-insides amnyama ngokuqinile. Futhi ku- $ 29, cabanga ngalesi isengezo sakho se-Intro to Kink, ngaphandle kokutshala imali kuzimpahla zesikhumba ezichithayo.
Ithenge ($ 29)
12. Izithandani ezilawulwa kude nge-LELO Ida'Isidlidlizi
Lesi sidlidlizi se-Lelo siza nenani lentengo elibucayi-kodwa kufanelekile, siyathembisa. Yenzelwe ukufakwa kowesifazane, izonisiza nobabili ngesikhathi socansi, ngenkathi imnikeza umfutho owengeziwe wokuqina. O, futhi ngenkathi ilawulwa kude, kungenzeka ukushintsha izilungiselelo ngaphandle kwayo.
$ 199 e-Amazon
13.I-Fin Vibrator Yeminwe
Umlingani ngamunye angashintshana ngokususa leli thoyisi eliluhlaza okwesibhakabhaka eminweni yakhe futhi alisebenzise, ​​kahle, nomaphi lapho ethanda khona. Lesi sidlidlizi esincane kodwa esinamandla singasetshenziswa kuzilungiselelo ezintathu zejubane phakathi kokubili ukudlala nokudlala ngocansi. Futhi, i-BTW, nakanjani ihlukaniswe ngokwanele ukuhamba nayo.
YITHENGE ($ 85)
14. I-Satisfyer Partner Multi-Use Vibrator Toy
Uyabona lezo zinkinobho ezimbili ezincane? Basebenzisa ama-motors amabili ahlukene (eyodwa ephezulu neyodwa ephansi), beletha i-vibe ngqo oyifunayo, ngqo lapho uyifuna khona. Leli thuluzi le-Satisfyer lingagqokwa ngezindlela ezi-14 ezahlukene, kwabesifazane, kwabesilisa futhi imibhangqwana. Ithiphu eshisayo: Kwenze umdlalo ukuthola konke ukusetshenziswa kwaleli thoyizi locansi ngaphambi kokuphela kokuhlukaniswa.
$ 43 e-Amazon
15. Amashumi amahlanu ama-Shades weGrey Inner Goddess Silver Pleasure Amabhola
Sifunde ukuthi lokhu kumayelana nani kuleyo trilogy yokubhala emayelana nalo mbhangqwana omnandi u-Anastasia noChristian, lapho emnikela emabholidini esiliva ukuba ashelele ngaphakathi kwakhe futhi azulazule ukuze amdlalise ngokuhlakanipha ngenkathi akha iphansi lakhe le-pelvic. Njengoba Amashumi amahlanu amathunzi eGrey umbhali uE. UJames uyabhala: 'Ngisuka ekunyakazeni okungapheli kwamabhola esiliva. Bangisinda ngaphakathi kimi, bangibhucunga ngaphakathi futhi bangenza ngiswele, ngidinge ukuya ocansini. ' Ngasinye salezi isisindo singaphansi kwama-ounces ama-4, kanti omunye umbuyekezi ubika ukuthi 'Ngicabanga ukuthi lawa amanye amabhola asindayo atholakalayo okuyinselelo enkulu nokuthokozisa kakhulu owugqokile.'
16. Kiki De Montparnasse I-Cloud Massager
Lesi sidlidlizi sivela kumklami wezingubo zangaphansi waseFrance uKiki De Montparnasse, futhi sinomuzwa ophakeme kuso — kusuka kusayizi waso omncane (kuphela ngama-intshi ama-5 no-1.5) kuya kuzici eziphezulu: Inamazinga ayisishiyagalombili okuqina nomsebenzi womoya okhukhumezayo imibhangqwana noma abantu ngabanye. 'Ubumnandi, ubuhlakani futhi busebenza kahle' kusho omunye umsebenzisi-ongeza ukuthi iza nesikhwama esincane sikasilika ukuze babone.
Ithenge ($ 145)
17. Nginike I-Pillo Pillow
Emini, kungumcamelo omnene onobumba obumnene phakathi kweqoqo elisembhedeni wakho. Ngobusuku, kuba isigaxa esithambile kodwa esiqinile esikusekela kuzo zonke izinhlobo zezikhundla. Amasentimitha ayishumi nanhlanu ububanzi namasentimitha ayi-18 ukujula, lo mcamelo uza nesembozo esisusekayo nesingawasheka. 'Ushintshe impilo yami yezocansi,' kubika omunye obuyekeza. 'Lokhu akuvumeli kuphela ukuthi owesifazane asekwe futhi abe sezikhundleni ezifanele kepha kuthatha ingcindezi kowesilisa ngesikhathi socansi lomlomo ikakhulukazi. Kunconywe kakhulu! '
18. Ama-Wristlets we-Kiki Handcuff
Iketanga legolide elijwayelekile elingagqokwa njengobucwebe uma liphindwe kabili esihlakaleni esisodwa noma njengezithiyo zokulala lapho ziboshelwe ezingalweni zombili, lezi zingalo ezivela kumkhiqizo wezimpahla zangaphansi zikanokusho uKiki De Montparnasse zinokweqa njengezintambo zombili kodwa zinhle kakhulu (futhi akukho key ukuze ulahlekelwe nakanjani).
Ithenge ($ 250)
19. I-Tenuto Wearable Vibrator Yamadoda
Idizayini eyingqayizivele emayelana nokwengeza imizwa yazo zonke izinhlaka ezithintekayo, i-Tenuto yenzelwe ukwelula nokuzivumelanisa nezitho zomthondo ne-perineum yokwanda kokugeleza kwegazi, ukwakhiwa okwandisiwe nenjabulo ehlala njalo. Udonsa izinhlangothi zalo ukuze ulingane nenduku, bese lidlidlizela ngaphambi nangesikhathi sokungena, ngakho-ke iscrotum, labia, shaft — konke kuyavuseleleka.
Ithenge ($ 170)
20. U-Eva's Amaphupho Okubeletha Ukushaywa Kwesigwedlo
Isikhumba se-vegan eselukwe kancane sedayimane, ngombala omnyama oyisisekelo, sigcwalisa ukwakheka kwakudala kwalesi sigwedlo. Ngamasentimitha ayi-13 ubude namamitha amabili nohhafu ububanzi, ayiyona enkulu kakhulu futhi iyesabeka, futhi ayisindi ngokwanele ongayisebenzisa kulokho okushiwo abenzi bayo: 'Yisebenzisele ukulungisa okuncane, ukuphulula isikhumba noma amaphupho amakhulu okushaya.'
Ithenge ($ 25)
ngibuyele esimweni sesikole
21. Ama-Suckers we-Lovehoney Colorplay Color-Changing Silicone Ingono
Lezi zinsimbi ezithambile zokuncela zivusa izingono, zishintshe umbala njengoba ukugeleza kwegazi kukhuphuka futhi izinga lokushisa lenyuka. 'Banikeza ukukhuthazeka okuncane ezingonweni, kokuhlangenwe nakho kwami ​​nje ngokwanele ukukhulisa ukuzwela kwabo ezingeni' lokuzijabulisa 'kusho omunye umbuyekezi, okuvuma ngokuvumayo ukuthi lezi azikho njengezibopho.
22. Fun Factory Manta
'Ngikuthengile lokhu ngemuva kweseshini lapho unkosikazi wami asebenzise khona isidlidlizi sakhe endondeni yami futhi ngathola ukuthi ngingahle ngibe nomdlandla kusukela ekuzweleni,' kusho omunye obuyekeza. 'Kunengqondo uma ucabanga nje ukuthi ipipi liyingquza enkulu ... liwumthombo omkhulu wenjabulo.' Lo mshini unamaphiko amabili abicah azungeza ipipi lowesilisa, anamagquma ngaphakathi kwamaphiko okubamba i-lubricant endaweni yokuzwa okwengeziwe. Ibhonasi eyengeziwe: Ilungele ukudlala wedwa nezithandani.
Ithenge ($ 140)
23. I-Bijoux Idiza Idayimane Elingu-Twenty One Elidlidlizayo
Ku-nightstand yakho, kubukeka njenge-objet yokuhlobisa emise okwedayimane. Kepha yivule futhi uyijikeleze ngamaphethini wokudlidliza ayisikhombisa namandla amathathu, futhi ilusizo kanye nokuhlobisa. Idivayisi enobubanzi obungamayintshi amathathu iyazinza entendeni yesandla sakho futhi womabili umphetho oyisicaba nethiphu ingasetshenziselwa ukukhuthaza bobabili abalingani.
Ithenge ($ 60)
24. I-Lora Dicarlo Spinning Oral Sex Stimulator
Leli thuluzi elincane elilingana nesundu lenzelwe ukunika abesifazane ulwazi olusha locansi lomlomo, olunamabhola amancane ensimbi ngaphansi kobuso obushelelezi besilicone akhuphukayo futhi awe ukulingisa ulimi olungakhathali. I-Robot cunnilingus, noma ngubani? Ibhonasi: Uma umlingani wakho ekubambela lokhu ngokumelene nemikhuba yakho emimbi, bazokwazi ukujabulela injabulo yakho iso neso ngasikhathi sinye njengoba bekunikeza (kulingisa) ucansi lomlomo.
Thenga Manje ($ 180)
25. I-Lovehoney Ignite 20 Ipulaki Yokudlidliza Umsebenzi
Umsebenzisi we-novice uyaphawula: 'Mina nozakwethu besifuna ukuzama okusha futhi besicabanga ukuthi sizonikeza amathoyizi endunu ithuba. Leli thoyizi alisabisi futhi likhululekile impela. Inqwaba yamasethingi ozodlala nawo futhi asebenziseka kalula. ' Ingamasentimitha amathathu ubude futhi inejubane ezintathu namaphethini we-17 wokudlidliza, futhi ibhonasi, ayinamanzi ngokuphelele.
OKUSHIWO: I-Yoga Yezithandani Ezingu-12 Isetshenziselwa Ukuqinisa Ubudlelwano Bakho (kanye neCore Yakho)
Ufuna amadili amahle nokweba kuthunyelwe ngqo ebhokisini lakho lokungenayo? Chofoza lapha .
ukususwa kwezinwele unomphela kumakhambi asekhaya
umngani wami omkhulu yimpilo yami
ama-amazon prime indian movie
izingcaphuno zeqembu lomngane omkhulu
ikhambi elihle lokukhula kwezinwele